ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့တဲ့ Broken တစ်ခု
Home » Think Different » ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ Broken တစ်ခု
ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ Broken တစ်ခု
Posted by Paing Lay on Dec 3, 2013 in Think Different | 35 comments
ကျွန်တော့် နာမည်က ပိုင်လေးလို့ ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ (Introduce myself)
အခု ကျွန်တော်ရေးမှာက ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)[mdy] ရဲ့ Singapore လူမျိုးတွေရဲ့ စင်းင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ broken English အကြောင်းပါ။ ဆရာဦးဘုန်းက စလုံးရောက်တုန်းက သူ သွားရင်းလာရင်း အဲဒီမှာ သူ့ရဲ့ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ တွေ့တော့ အဲဒီမှာ အခြေကျနေတဲ့ သူ့ ဘော်ဒါနဲ့ ဆုံရင်း စကားလက်ဆုံကျဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ပြောရင်းနဲ့ သူ့သားသမီးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့သားသမီးတွေ အကုန်လုံး အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေ ချည်းပဲ။ ဆရာ ဦးဘုန်းကတော့ ဝမ်းသားလို့ပေါ့။ အဲဒီမှာ သူ့ သူငယ်ချင်းကပြောတယ်။ “မင်းကသာ ဝမ်းသာနေတာ ငါကတော့ လုံးဝ စိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့” အဲဒီမှာ ဆရာ ဦးဘုန်းက ကြောင်သွားတယ်။ “ဘာကြောင့်လဲ”ပေါ့။ “ဒီလိုကွ ငါက ငါ့သားငါ့သမီးတွေကို ခေတ်မှီအောင် ပညာတွေတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာဆိုတာ မေ့နေကြပြီလေ။ ပြီးတော့ အစားအသောက်တွေကအစ အနုပညာ ခံစားတတ်တာတွေအဆုံး မြန်မာအငွေ့အသက်တွေ ပျောက်ဆုံးနေလို့ ငါဝမ်းနည်းမိတယ် သူငယ်ချင်းရာ” သူ့သူငယ်ချင်းက ငိုသံပါဖြင့်ပြောသည်။
ဘာရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဦးဘုန်း(ဓာတု) ရဲ့ “ငှက်တစ်ကောင် ရဲ့ အတွေးရနံ့” စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာကို ရွာသူရွာသားများအားလုံးသိအောင် ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီရွာထဲမှာလည်း ဆရာဦးဘုန်း(ဓာတု) ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလည်း ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလို IT ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေက စာရှည်ရှည် ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့စရာလို့ပဲ ထင်မှတ်နေကြတယ်ဗျ။ အဲဒီလိုဖတ်ရတာ ဆရာဦးဘုန်းက အဲဒါကို ကြိုမြင်သွားတာလား သူချရေးပြတဲ့ အတွေးခေါ်တွေကပဲ လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့စရာ ဖြစ်သွားလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေးလိုက် တွေးရင်း ပြန်ဖတ်လိုက်နဲ့ တော်တော် အရသာရှိတယ်ဗျ။
အခု ကျွန်တော်ပြောမယ့် ဆိုလိုရင်း အကြောင်းအရာက ဒီလိုပါ။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါဆီ လည်လည်သွားရင်း အင်တာနက် သုံးဖြစ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ အသိ ညီငယ် တစ်ယောက်က ဒီလိုမေးတယ်ဗျ။ “ အကို Myan-glish ကို ဘယ်လိုရိုက်ရတာလဲဟင်” ။ အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ မင်းကွာ Myan-glish ကတော့ အလယ်တန်းကျောင်းသားတောင် ရိုက်တတ်နေလောက်ပြီ(တကယ်တော့ သူလည်း တက္ကသိုလ် တောင် တက်နေပြီ)။ ” ကျွန်တော်လည်း ရယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ သူလည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်ဆက်သုံးနေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သာ Myan-glish Translator လုပ်စားရင်တော့ ခရိုနီ ဗိုလ်တေဇနဲ့ နင်လား ငါလား ဖြစ်သွားလောက်တယ် အဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။ တကယ်တော့ဗျာ Speaking တွေ Computer Training Center တွေ နှစ်ပေါက်လောက်အောင် တက်ပြီးကာမှ တစ်ချို့ ဝန်ထမ်းဘဝ လုပ်သက်ရလာတဲ့ အချိန်အထိကို Myan-glish တွေက သုံးကြတုန်းပဲဗျ။ လူငယ်အချင်းချင်း ဆရာလုပ်တယ်ဆိုပြီး Myan-glish သမားတွေတော့ အနော့ အိမ်ရှေ့မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်ပြီး ရစ်သီရစ်သီ လာလုပ်နေရင် ဒုက္ခ (အထူးသဖြင့် ကောင်မလေးများ) ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက မညံ့ကြပါဘူး။ ခေါက်ရိုးကျိုး မှိုတက်နေတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကသာ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းဖို့အတွက် နှောင့်နှေးနေတာပါ။ တော်သေးဘီ ။ ခရက်ဒစ်တူ- အဘဖော
ပထမဆုံးပို့စ်မှာတင် အရေးအသားက ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းအားရှိပါပေတယ်။
ပထမဆုံး ကောမန့်အတွက် ကျေးကျေးပါ Ma Ma ရေ။
အပေါ်ပိုင်း က ဦးဘုန်း(ဓာတု) နှင့် ၊
အောက်ပိုင်းက Myan-glish က ၊
အဆက်အစပ် မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်ကွယ် ။
ဖိုနတစ် သေချာမသိရင် မြန်းဂလစ်ကို နားလည်အောင် မရေးတတ်ဘူးမှတ်။
အဲဒီမြန်းကလစ်နဲ့ရေးရင် တော်တော်နဲ့ရီပလိုင်းမပြန်နိုင်ဘူး။ မနဲကိုဘာသာပြန်နေရတာ။ ကေဇီ့မြန်းဂလိ က တော်သေး ကျောက်စ်မြန်းဂလိကဘယ်လိုမှဖတ်ရဘူး ဟီဟိ ( ဟိုလူရီးမလာခင် အတင်းတုတ်ထားတာ ဒီစာ ဟိုလူရီးမမြင်ဇီရ )
ကျန်း… မွသဲ ဗလာချီ အတင်းတုတ်နေတယ်…
နောက်ပြီး စလုံးတွေပြောတဲ့ စင်းင်္ဂလိပ်က…
နားထဲမှာ အတော် ထော်လော်ကန့်လန့်…
coz u dun know, mah..!
ahh yahhh… u huh…!!
All dd lah…. (Already lah…)
Today cannot lah….
U many many jalan lah…
ဟီး ဟီး အများရှိသေးတယ်…
why u, so kay poh, kay poh??
all same same, mah..!!
u very kyasu lah… (selfish)
today cannot tomorrow lah…
already makan lah… (eat)
tay lah… (tea lah…)
kopi lah… (coffee lah)
ပို့စ် ပိုင်ရှင်က စင်းဂလိပ်အကြောင်းမရေးလို့
ကျောက်စ်နဲ့ မိဇာဂျီး အားဖြည့်လိုက်တယ်…
အဲလော့ တို့ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးးးး
ဟီဟိ အန်န၀ါစိုးမိုးရေးတဲ့ စင်းဂလိကိုသွားသတိယတယ်။
သူတို့က သူတို့ကိုဘိုင်ကျနေတဲ့ကိုစံသိန်းလားလို့မေးတာမှတ်လို့အတင်းငြင်းနေတာဆိုပဲ။ ဟိုကဈေးဝယ်ခိုင်းတာကို
ဟီ ဟိ ။ အဲဒီ Sin-glish ကိစ္စ ဟိုတစ်နေ့ကဘဲ အပြောခံလိုက်ရတယ် ။
Paramatta က ကုလားဆိုင်မှာ ၊ အိမ်ပြန် ကူလ်ဖီး ပါဆယ် သွားဝယ်တာ ။
ဆိုင်ရှင် ကုလား က ဇွန်း ယူသွားအုံးမလား မေးတာကို ၊
Sin-glish ကို စိတ်ထဲက စွဲနေလို့ ၊ ရုတ်တရက် ” No Need Lah ” လို့ဖြေမိတာ ။
” No, thanks ” လို့ မဖြေလို့ ဆိုပြီး ၊ မိန်းမ ရဲ့ အဆူ တော်တော် ခံခဲ့ရတယ် ။
ဟီ ဟိ ။ အခုပြောရင်း သတိရလာလို့ ၊
အဲဒီ ကူလ်ဖီး ကို အခုယူစားနေတယ် ။
စား ကောင်းတယ် သိလား ၊ ရွှေပုဇွန် ကူလ်ဖီး လက်ရာ မှီတယ် ။
မြေပဲ / သီဟိုစေ့ မှုန့်လေးတွေတောင် ပါ သေး ။
လူတစ်ယောက်စာ ဗူးလေးကို ၊ ၂ ဒေါ်လာ တဲ့ ။ တန်တယ် ။
မKZက ဘယ် phonetic ကိုပြောတာလဲတော့မသိဘူး..
UFL မှာ၃လတက်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ phonetic လုပ်တာ myan-glish ကိုဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိဖြစ်သွားဖူးတယ် ..
ဖိုနစ် သီချင်းတွေ နားထောင်ဖူးသလားးး
အေ အစ်(စ) ဖော် အယ်ပယ်(လ) ၊ အယ် အယ် အယ် ပယ်(လ) (A is for Apple,aa apple)
ဘီ အစ်(စ) ဖော် ဘော(လ)၊ ဘ ဘ ဘော(လ) (B is for ball,bb ball)…………
ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေလေ။ ဒီမှာတော့ ကလေးတွေက အဲဒီ သီချင်းတွေ နားထောင်ရုံနဲ့ ၃/၄ နှစ်မှာ စာလုံး (word) တစ်ခုတွေ့ရင် အနီးစပ်ဆုံး အသံထွက်ပြီ။
အမတို့တုန်းကတော့ ဖိုနက်တစ် ကို သူ့ သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ သင်ခဲ့ရတာ။ တီချယ်ကြီးဆီမှာ။
အဲဒါဆို ဒစ်ရှင်နရီကို ဖတ်ပြီး အသံထွက်စစ်လို့ရပြီ။
အင်္ဂလိပ် စာလုံးရဲ့ ဘေးမှာ မြန်မာလို အသံထွက်တွေ မှတ်စရာမလိုတော့ဘူးးးးး
For Example.. ရဲ ဆိုပါစို့။
ဘားဂလစ်လို ရေးမယ် ဆို အမကတော့ Yal လို့ ရေးမှာပဲ။ ဖတ်တဲ့သူက အသံထွက် အနီးစပ်ဆုံးနဲ့ အမှန်ကို တန်းသိနိုင်တယ်။
တစ်ချို့က ပေါင်းတယ်။ “Ye” လို့။ အဲဒါဆို အမ အနေနဲ့ ဆို အလိုအလျောက် “ရက်” လို့ အသံထွက်ဖြစ်မယ်။ ဘာလို့ ဆို ”e” ရဲ့ အသံထွက်က ဖိုနက်တစ်အရဆို “အက်” သံ ထွက်တယ်။
မရုံရင် ဘားဂလစ် တက်(စ) အင်ဂျင်နဲ့ စမ်းကြည့်။ http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm
အဲဒါနဲ့ မြန်မာလို အတော်မြန်အောင် ရိုက်နိုင်ရင် အသံထွက် သဘောတရားကို နီးနီးစပ်စပ်သိမယ်။
မရုံရင် ကျောက်(စ) ကို မေးကြည့်။
ဟီး ဟီး တူပေါတဲ့အတိုင်း ကျောက်စ် မြန်မာစာကို…
Phonetic အတိုင်းရိုက်မှ လိုချင်တဲ့စာလုံး ရပါ၏…
” ဟီး ဟီး တူပေါတဲ့အတိုင်း ကျောက်စ် မြန်မာစာကို…
Phonetic အတိုင်းရိုက်မှ လိုချင်တဲ့စာလုံး ရပါ၏ ”
ဦးကျောက် ၊ အဘ က ဘားဂလစ် နဲ့ရိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး ။
အဲဒီ Page မှာဘဲ Characters List ဆိုတဲ့ အကွက်လေးကို check လုပ်လိုက်ရင် ၊
မြန်မာ စာလုံးတွေ လက်ကွက် ပေါ်လာတယ်လေ ။
အဲဒါ နှင့် ရိုက်နေတာ ။
ကျော် သိတဲ့ ပိုင်လေး ကတော့ဖြင့်
ခု ပိုင်လေးကတော့ ဘူလည်း တိဘူးးး ငိငိငိ
“အခု ကျွန်တော်ရေးမှာက ဆရာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)[mdy] ရဲ့ Singapore လူမျိုးတွေရဲ့ စင်းင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ broken English အကြောင်းပါ။ ”…လို့အစမှာပြောထားပြီး…အဲဒီ“စင်းင်္ဂလိပ်” အကြောင်းလည်းမပါ ပါလား
လို့ ရေးတာ ဘာမှန်းမသိလို့ မေးမိပါတယ်..
သေဟဲ့ နိန္ဒိယ …
ယိုးဒယားလို5ကို ဟ လို့ခေါ်တယ်…
ဆိုတော့… ဟားဟားဟားဟားလို့ ရေးချင်ရင်…
55555 လိုက်တာပေါ့ဗျာ… ဟီးဟီး
ဒါဗြဲ… အချွန်နဲ့ မ မရ
အခုလို ကောမန့်တွေ တစ်သိုက်တစ်မြုံ တစ်ထွေးနဲ့ ကြိုဆိုကြတဲ့ အူးအူးဒေါ်ဒေါ် နောင်တော် အမတော်များ အားလုံးကို ကျေးကျေးပါဂျာ…….။ :mrgeen: ဦးဘုန်းရဲ့ မူရင်းစာအုပ်မှာလည်း စင်းင်္ဂလိပ် အကြောင်းကို မရှင်းပြထားဘူးဂျ။ သူ့ စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ အတိုင်း အနော့ ဘရိန်းနဲ့ အနည်းငယ် ကွန်းထားပါကြောင်းပါ ခီညော်။
အဘဖောရေ အနော်ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာက တိုတောင်းလွန်းလို့ ဦးဘုန်း(ဓာတု) ရဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ အားဖြည့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ခီညော်
အူးအူး အံဇာ ကတော့လုပ်ပြီ အနော့ကို မှတ်မိလွယ်အောင်လို့ ရွာသူား အားလုံးကို ပြောပြပါ့မယ်။ အနော့ ဇာတိမြို့က ဆရာမကြီး ဒေါ်စောမုံညင်း နဲ့ ဆရာကြီး ခင်မောင်တိုး(မိုးမိတ်) ဇာတိဖြစ်ပါတယ် ခီညော်
မမ KZ ရေ Myan-glish က မလွယ်ဘူး ရှိုဒေါ့ သင်တန်းဖွင့်ဖြစ်ရင် အနော့ကို လက်တို့ပါဦးနော် နော်လို့
ရတယ်။ ရတယ်။ ရတယ်။
အဲလိုပေါက်ကရမှန်သမျှ စင်းကလစ်ရော မြန်းဂလစ်ရော ဘားဂလစ်ရော၊ ရောသမရော အကုန်သင်ပေးမယ်။
သင်တန်းကြေးလေး အရင် စု လိုက်။
ကျွန်တော်လဲ Myan-glish မကျွမ်းလို့စရင်သင်ချင်တယ်။
အကျိုး စင် မယ်
myan-glish ka lwal ma lo lo nae khat par dae…
thu myar yeathan htwat nae koathan htwat nae lwae nay daeakhar meaning ko taw taw nae sin sar ma ya bu phyit tat tae..but kyar lar yin dop ok thwar par dae.. practice taradi ka par..
ဟီး… English is the key of window to world…
အခုလို ရှင်းပြသွားတဲ့ အတွက် ကျေးကျေးပါ မမွန်မွန်